Musuq maasuq lagu eedeyey dowlada Federalka iyo baaritaano hoose oo socda.
Posted by admin on May 07 2011 21:12:45
Yurub:(Hiranstate.com)- Qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya musuq maasuq hareeyey dowlada ay hogaankeeda hayaan Farmaajo iyo Madaxweyne Shariif. dhaqaalaha aanu siino waa la lunsadaa hubka aanu ciidamada dowlada siinana waxuu yaalaa suuqa weyn ee Bakaaro. war bixin.
Yurub:-wadamada horey u maray oo si weyn u taageerayey dowladahii dalka soo maray ee dhamantood ahaa kumeel gaarka ayaa hada baaritaano iskood ah iyagu wado iyadoo warbixin ay dhawaantan soo saareen lagu ogaaday in musuq maasuqa TGFda ka jira awkeed la lunsaday dhaqaalo badan oo loogu deeqay shacabka Somaliyeed oo ay hantidaasi ku dhacday hogaanka sare ee dalka hogamiya qaarkood oo iyagu jeebka gashtay.
War bixinta waxey aad uga hadleysaa in hubka la siiyo ciidamada dowlada uu yaalo suuqa weyn ee Bakaaro oo ah goob ay gacanta ku hayaan ururka Shabaab. waxaa hada bilaawday dabagal lagu hayo qaar hogaanka sare ee dowlada ka tirsan oo iyagu lagu tuhmayo musuq maasuq iyo iney wax isdaba mariyeen. dadaalada socda ayaa ah kwo si weyn loola soconayo hantida maaxweynaha Somaliya Shiikh Shariif iyo qaar horey uga tirsanaa maxkamadahii kedibna wasiiro ka noqday xukumadii Cumar C/rashiid.
Inkasta oo aysan wax badan kala socon madaxweynaha iyo lataliyaashiisa arimahan hada soo cusboonaatay oo ay ku mashquulsan yahiin doorasho la diyaarinayo qaabkii ay u dhici laheyd sidii ay u hor istaagi lahayeen,hadane dowladaha Mareykanka iyo Yurub ayaa aaminsan in ay jiraan hogaamiyaal gacan saar la leh kooxahan wadanka ka daaalaama kuwaasi oo uu hub badan kaka yimaada dhinaa dowlada.
La soco war bixinta oo dhameystiran dhawaan.
Isha warka Hiiraa State